Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad ka dhan ah Gumeysiga Ethiopia oo ka dhacay Canada+Sawiro.
Mudaharaad ka dhan ah Gumeysiga Ethiopia oo ka dhacay Canada+Sawiro.
Posted by Daljir	/ March 29, 2018
Mudaharaad balaadhan oo lagaga soo horjeeday gumeysiga Ethiopia kii hore iyo ka cusub ayaa Saacado yar ka hor ku soo dhamaaday xarunta Dowlada hoose caasimada gobalka Ontario Toronto – wadanka Canada.
Mudaharadkan oo ahaa mid aad u balaadhan waxaa siwada jir ah isaga kaashaday Sadexda jaaliyadood ee Ogadenia ,Oramia iyo Amhara,mudaharadayaasha oo watay calamadooda iyo calaamado muujinayay waxay diidayaan iyo waxay doonayaan ayaa ku qeylinnayay halku dhagyo ka dhan ah gumeysiga Ethiopia.
Mudaharadaayasha ayaa Dowlada Canada , warbaahinta iyo Hay’adaha xuquuqul insaanka ugu baaqay inay gacanka geystaan sidii shucuubta dulman looga samata bixin lahaa kooda dhiiga shacabk aan iska caabin karin ku naaxday ee magaceeda loo Soo gaabiyo EPRDF.
Mudaharaadka oo muqaal ah waxaad kaga boqon doontaa wararkeena danbe.